ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်...အဲ့ဒီကတိတွေက မကြာသေးပါဘူး.. ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လကမှပါ - New State
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်…အဲ့ဒီကတိတွေက မကြာသေးပါဘူး.. ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လကမှပါ
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်...အဲ့ဒီကတိတွေက မကြာသေးပါဘူး.. ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လကမှပါ
ပြည်သူ့ သစ္စာဖောက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်ဆစ်
‘သစ္စာဖောက်ခြင်း’ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ကို ပြည်သူတွေ မပေးစေလိုပါ..။ ဒီလိုခံစားချက်ဟာ ပြည်သူအတွက်ရော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအတွက်ပါ အဆိုးရွားဆုံး ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
‘သစ္စာဖောက်ခြင်း’ကို ခံရတဲ့အခါ ပြည်သူတွေ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကို ယုံကြည်မှု ဆုံးရှုံးသွားကြပါလိမ့်မယ်။
❝ ပြည်သူတွေကို ပစ်သတ်နေရင် ရပ်ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး ❞
❝ မြန်မာ့တပ်မတော်နေ့ဟာ လူသတ်ပွဲနေ့ပါ❞
❝ မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက်တွေဟာ ဒီမိုကရေစီကို ဖျက်ဆီးပစ်နေပြီ ❞
❝ မြန်မာစစ်တပ်အနေနဲ့ ပြည်သူကို ဆက်လက်ပစ်သတ်နေရင်တော့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့ မတုံ့ ပြန်ဘဲ ငြိမ်နေလို့မရတော့ဘူး ❞
❝ လက်ရှိစစ်အာရှင်ဆန့်ကျင်ရေး ဆန္ဒပြသူတွေ တောင်းဆိုနေတဲ့ ဖက်ဒရယ်တပ်မတော်ကိုလည်း ထောက်ခံတယ် ❞
❝ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေမှာလည်း အလားတူ ဘုံရန်သူရှိထားတာမို့ အတူလက်တွဲပြီး ပြည်သူကိုတိုက်တဲ့တပ်ကို ပြန်တိုက်ရလိမ့်မယ် ❞
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကတိတွေက မကြာသေးပါဘူး.. ၂၀၂၁ ခုနှစ် မတ်လကမှပါ..။
ပေးထားတဲ့ ကတိအတိုင်း ‘စစ်တပ်ကိုပြန်တိုက်ပေးပါ’..။
ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာ လင်ယောကျ်ား အသတ်ခံရလို့ မုဆိုးမ ဖြစ်သွားရသူတွေ၊ မိန်းမ မုဒိမ်းအကျင့်ခံရလို့ ဘဝပျက်သွားတဲ့ယောက်ျားတွေ..မရေမတွက်နိုင်ပါ။
ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာမိဘတွေ စစ်ကြောရေး မှာ အသတ်ခံရလို့ မိဘမဲ့ ဖြစ်သွားရတဲ့ ကလေးတွေ၊ သားသမီးတွေ စစ်ကြောရေး မှာ အသတ်ခံရလို့ ကမ္ဘာပျက်နေတဲ့ မိဘတွေ.. မရေမတွက်နိုင်ပါ။
ကျမတို့ မြန်မာပြည်မှာစာတစ်ကြောင်း ကဗျာတပုဒ်ရေး နှစ်ပေါင်းများစွာ ထောင်ထဲမှာ မသေရုံတမယ်ရောဂါရနေသူတွေ.. မရေမတွက်နိုင်ပါ။
အခု ၂၀၂၂ ခုနှစ်မေလမှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးက လူသတ်သမား မိစ္ဆာ မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ လက်ဆွဲပြီး နှုတ်ဆက်တယ်။
ရွံမုန်းစရာကောင်းလှတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ ‘လိုတမျိုးမလိုတမျိုး’… ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာ စစ်အာဏာရှင်တွေနဲ့ နီးနီးကပ်ကပ်နေခဲ့သူဆိုတော့ ပိုပြီးသိမယ်ထင်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေက မလိုတုန်းက သတင်းစာထဲမှာ ‘ဘိန်းစား ဓားပြခွန်ဆာ’ လို့ရေးကြ၊လှောင်ကြ၊နှိမ့်ချပြောဆိုကြ..။
ခွန်ဆာရဲ့အသုဘမှာတော့ အဲ့ဒီ့ စစ်အာဏာရှင်တွေကပဲ ပန်းခွေတွေနဲ့ ဝမ်းနည်းကြောင်းသဝဏ်လွှာတွေနဲ့ ကြွေပြနေခဲ့တယ်မဟုတ်လား..။
အာဏာရှင်စနစ်ကို မိုက်မိုက်ရမ်းရမ်း ကျားကန်ပေးထားတဲ့ ‘ကြားနေ ကြောင်သူတော်’ တွေမြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး..။
ပြည်သူတွေကို ထောက်လှမ်း သတင်းပေးပြီး သတ်နေတဲ့ ဘောမ၊သူလျှို၊ဒလန်၊ မျိုးချစ်၊ သွေးသောက်တွေစတဲ့ အာဏာရှင်ရဲ့ ‘ကျွန်’တွေ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး..။
ပြည်သူတွေကို ခုံရုံးတင် မစစ်ဆေးဘဲ စစ်ကြောရေးမှာ ညှည်းပန်းနှိပ်စက် သတ်ဖြတ်တဲ့မိစ္ဆာတွေ မြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး..။
ပြည်သူတွေကို သတ်ဖြတ်ရတာဂုဏ်ယူတဲ့ အရူးအမူးသေနတ်သမားတွေမြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး..။
လူလိုမတွေးတတ်တဲ့.. ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် လိမ်ညာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ စစ်ကောင်စီကို လက်ခုပ်ဩဘာတီး ပေးနေတဲ့ အဖွဲ့တချို့မြန်မာပြည်မှာရှိနေတယ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး..။ သူတို့က အာဏာရှင်တွေရပ်တည်ဖို့အတွက် အဆုံးမရှိတဲ့ လောင်စာဆီတွေပဲ..။
အဲ့ဒီ့ လောင်စာဆီကိုအသုံးပြုပြီး အာဏာရှင်တွေရှို့တဲ့မီးတွေကို အပြီးသတ်ငြှိမ်းဖို့ တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှာတာဝန်ရှိတယ် ..။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသွားဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ လူသတ်သမားတွေနဲ့ မုဒိမ်းကောင်တွေနဲ့ ‘ငြိမ်းချမ်းရေး’ အကြောင်းတွေများ ပြောကြတာလား..? လူသတ်သမားတွေနဲ့ မုဒိမ်းကောင်တွေရဲ့ ကလိမ်ကကျစ် စီမံကိန်းတွေကရော ဘာတွေလဲရှင့်..? ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတို့ ‘ငြိမ်းချမ်းရေး’ ဆွေးနွေးနေတုန်းမှာ ပြည်သူတွေဟာ သွေးစက်လက်နဲ့ ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်စွာ ထွက်ပြေးနေရပါတယ်။
အမြော်အမြင်ကြီးစွာနဲ့ ငြိမ်းချမ်းသော စူပါပါဝါနိုင်ငံကို တည်ဆောက်လိုသတဲ့လား…? ဒီလူတွေရဲ့ ပါးစပ်ထွက်သမျှ တခြားမဟုတ်ဘူး..အရှက်မရှိ လိမ်လည်မှုတွေချည့်ပဲ။ သေချာတာက လူသတ်သမားနဲ့ အသတ်ခံရသူတွေကြား ‘ငြိမ်းချမ်းရေး’မရှိပါ။
သေချာတာက မုဒိမ်းကောင်တွေနဲ့ မုဒိမ်းကျင့်ခံရလို့ လူစဉ်မမှီတော့တဲ့သူတွေအကြား ‘ငြိမ်းချမ်းရေး’မရှိပါ။
ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်ဆစ်ရှင့်… ‘ဖက်ဒရယ်’ လိုလားတဲ့ ပင်လုံစာချုပ်ချုပ်ဆိုတဲ့အထဲမှာ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာ ပြည်သူ ပြည်သားတွေနဲ့ တသားတည်းရှိရဲ့လား…? မိစ္ဆာ စစ်တပ်နဲ့တွေ့ခဲ့တာလည်း မှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုအတွက်သွားတွေ့ခဲ့တာလား..? ‘ပြည်သူတွေနဲ့ အတူ တပ်ကိုပြန်တိုက်မယ်’ လို့ ပြည်သူတွေပြောခဲ့တာ မမေ့စေချင်ပါ။
ကတိအတိုင်း ဖက်ဒရယ်ကို ပြည်သူတွေဆီယူဆောင်ပေးရပါမယ်.. တိုင်းပြည်သွေးချောင်းစီးခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့က နိုင်ငံသားတိုင်းတာဝန်ဖြစ်တယ်။
နောင်လာနောက်သား လူငယ်တွေအတွက် နံပါတ်တုတ်တွေ၊ ကျည်ဆံတွေ မပေးခဲ့စေချင်..။